China Ohiri Isi Block Biarin emepụta na suppliers | Xinri
Ohiri isi ngọngọ amị bụ n'ezie a variant nke miri uzo bọl agba. Mpaghara mgbanaka ya dị elu dị n'èzí bụ nke dị okirikiri, enwere ike dakọtara ya na oche nke concave conhere nke na-arụ ọrụ iji kwado ọrụ. A na-ejikarị arụ ọrụ dịpụrụ adịpụ iji buru ibu radial na axial ibu nke bụkarị ibu radial. N'ozuzu, ọ gaghị adabara ibu naanị axial.
Mpaghara mpempe ya dịpụrụ adịpụ bụ nke dị okirikiri, enwere ike itinye ya n'ime akụkụ okirikiri concave nke oche na-ebu ka ọ rụọ ọrụ nke itinye n'ọnọdụ. Ohiri isi ngọngọ biarin na-bụ-eji na-agba radial na axial jikọtara ibu, nke bụ tumadi radial ibu. N'ozuzu, ọ gaghị adabara ibu naanị axial.
1.Low esemokwu nguzogide, obere ike oriri, elu n'ibu arụmọrụ, mfe na-amalite; Ezi nkenke, nnukwu ibu, obere ejiji, ndụ ogologo ndụ.
2.Standardized size, interchangeability, mfe echichi na disassembly, mfe mmezi; Kọmpat Ọdịdị, ìhè ibu, nta axial size.
3.Sfọdụ biarin nwere arụmọrụ nke ịkwado onwe ha; Adabara uka mmepụta, mụ na a pụrụ ịdabere na àgwà, elu mmepụta arụmọrụ.
4. Nzipu esemokwu torque dị nnọọ ala karịa ọmụmụ ike ike mgbali amị, otú esemokwu okpomọkụ ịrị elu na ike oriri na-ala; Oge mmalite esemokwu dịtụ ntakịrị karịa oge esemokwu ntụgharị.
5. Nghọta nke nrụrụ nrụrụ iji gbanye mgbanwe dị obere karịa nke ibu ọrụ nke hydrodynamic.
6. Axial size dị obere karịa nke ọdịnala hydrodynamic na-ebu; O nwere ike iguzogide ma radial na ịtọkọta ibu ibu.
7. Unique imewe nwere ike nweta magburu onwe arụmọrụ n'elu a dịgasị iche iche nke ibu na-ọsọ; Iburu arụmọrụ bụ dịtụ emetụtaghị fluctuations na ibu, ọsọ na-agba ọsọ.
Mmejọ nke ohiri isi na-ebu oche
1. Oké mkpọtụ.N'ihi nnukwu ọsọ nke mpụga na-aga n'ihu na oche, ọ ga-eme nnukwu mkpọtụ mgbe ọ na-arụ ọrụ.
2. Ọdịdị nke ụlọ obibi dị mgbagwoju anya. Iji mezuo ojiji nke ụdị biarin dị iche iche, imewe nke ụlọ na-ebu ụlọ dịtụ mgbagwoju anya, ụlọ obibi ahụ na-emekwa ka ọnụahịa mmepụta nke ngwaahịa ahụ pụta, na-akpata ọnụ ahịa nke mpụta gburugburu * na oche dị elu.
3. Ọbụna ma ọ bụrụ na biarin ahụ dị mma lubricated, arụnyere nke ọma, uzuzu na mmiri na-egosi, ma na-arụ ọrụ nke ọma, ha ga-emesị daa n'ihi ike ọgwụgwụ nke ihu kọntaktị na-agagharị.
Ohiri isi ngọngọ amị na-eji na Ngwuputa, nkà mmụta banyere ígwè, ugbo, chemical ụlọ ọrụ, akwa, ígwè obibi akwụkwọ na dyeing, erute ígwè, wdg
Nke gara aga: Ntinye ntinye nke nwere UCP 200 zuru oke
Osote: Wheel Hub Iburu
High Speed ​​Ohiri Isi Block Iburu
Ohiri isi ngọngọ ụlọ biarin
ọkọnọ ohiri isi ngọngọ
Fanye amị na ụlọ UK
Radial insert biarin UCFA
Mpi price insert amị UC300
XRL ika fanye agba UC200